केही दिनमै जन्डिसबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? अमृत भन्दा कम छैन यो घरेलु उपाय - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
केही दिनमै जन्डिसबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? अमृत भन्दा कम छैन यो घरेलु उपाय
जीवनशैली कयौँ यस्ता कुरा छन्, जसलाई हामी वेवास्ता गर्दै आएका छौँ। उक्त साना साना कुराले विस्तारै गम्भिर रोगको रुप धारण गर्ने गर्छ।
आज हामी तपाईलाई एक खतरनाक रोगका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जसको नाम हो जन्डिस। जन्डिस सुन्दा सामान्य लाग्ने भएपनि यसका लक्षणलाई वेवास्ता गर्दा यो ज्यानलेवा पनि हुनसक्छ।
पाचन तन्त्र कमजोर हुनु पनि जन्डिस रोगको कारण भएको बताइन्छ। यो रोग लाग्दा मानिसको छालादेखि लिएर नङ, आँखा, पिसाब समेत पहेँलो हुने गर्छ।
यो समस्याले गर्दा मानिसको लिभर कमजोर भएर ठिकसँग काम गर्दैन। जण्डिस हुँदा मानिसमा एलर्जी तिब्र रुपमा हुने गर्छ। जसका कारण अनिद्राको समस्या देखिन्छ। धेरै रिस उठ्ने तथा पहिलो चरणमा निकै चिन्तित पनि बनाउने गर्छ।
यति मात्र हैन् यो रोग लाग्यो भने भोक पनि विस्तारै कम हुँदै जान्छ। आँखा, जिब्रो, छाला, पिसाब पहेँलो हुनु यस रोगको लक्षण हो। यस्ता लक्षण देखिए भने वेवास्ता गर्नु राम्रो हुँदैन्। आज हामी तपाईलाई यस रोगबाट छुटकारा पाउने केही घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती उपाय ?
कास्टर (Castor) को पातको रस
कास्टरको पातको रस पनि जण्डिसका विरामीका लागि रामबाण हुने गर्दछ। कास्टरको हातको रस निकालेर काँचो दूधमा मिलाएर पिउँदा जण्डिसबाट केही दिनमै छुटकारा मिल्ने गर्छ। आयुर्वेदमा यसको हातलाई निकै राम्रो औषधि मानिने गरिन्छ।
उखुको जुस पनि जण्डिस रोगका विरामीका लागि निकै फाइदाजनक हुने गर्छ। उखुमा कयौँ प्रकारका पौष्टिक तत्व पाइने गर्छ। जो शरीरमा पुग्नासाथ आफ्नो काम गर्न थाल्छ।
चनाको दालको प्रयोग
यस बाहेक चनाको दालको प्रयोग पनि जण्डिस रोगका बिरामीका लागि निकै फाइदाजनक हुने गर्छ। राति सुत्नुअघि थोरै चनाको दाललाई पानीमा भिजाइदिनुहोस्।
बिहान उठेर उक्त दालको पानी फाल्नुहोस् र उक्त दालमा सख्खर मिलाएर खानुहोस्। यदी तपाईले केही दिनसम्म लगाएर यसरीनै यसको प्रयोग गर्नुभयो भने जाडै नै जण्डिस रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।